Landa i-Gloster Meteor T.7 FS2004 - Rikoooo
Usayizi 10.6 MB
Play 6 475
Umbhali: Dave Eckert Ralph Pegram uNick Needham Rob Barendre
I-fighter enkulu, iphaneli yokusebenza. Injabulo yangempela ukuhamba. Siyabonga abalobi bomsebenzi omuhle weli add-on. Inguqulo ye-T.7 iyinhlangano yokuqeqesha ama-two (okukhiqizwa amakhophi we-650).
I-Gloster Meteor yayiyi-jet yokuqala yezempi eqhutshwa yi-United Kingdom, futhi yiyona kuphela indiza yalolu hlobo olwenziwa ngama-Allied forces phakathi neMpi Yezwe Yesibili. Yakhelwe cishe amakhophi we-4000, amanye alayisensi futhi asetshenziswa amazwe amaningi ikakhulukazi phakathi kwama-1950.